Hitachi Factory | China Hitachi mpanamboatra, mpamatsy
Original Hitachi APMT1135PDER-HT JP4020 cnc fitaovana ho an'ny fikosoham-bary
Original Hitachi APMT1135PDER-HT JP4020 cnc fitaovana ho an'ny fikosoham-bary 1.Supply ISO standard cnc tool. 2.Materialy: vita amin'ny akora virjina 100%. 3.Delivery: ao anatin'ny 10 andro aorian'ny fanamafisana ny prepaid. 4.Other: Afaka arakaraka ny mpanjifa manolotra taratasy misy sary na habe izahay, ary manaiky baiko kely. Milina azo ampiasaina cnc fitaovana Stock 1.For standard, manana ampy amin'ny stock.2. Ho an'ny tsy fenitra, mila amboarina. Baiko tsy manara-penitra Ampanjifaina ho toy ny fangatahana. Fonosana 10 pcs / boaty plastika, ...
Hitachi cnc lathe fitaovana fanapahana CPMT080204 CY250
Endri-javatra ny tsoratry ny karbida hitachi 1. marika Japoney voalohany; 2. Mety amin'ny vy sy vy tsy misy fangarony & vy vy & vokatra tsy manara-penitra; 3.A vokatra marobe amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary kofehy; 4.Fiorenana sy filaminana amin'ny fihodinana mahomby; 5. faritra faritra fampiharana ISIS & ANSI. Famaritana ny tsiranoka hitachi karbida dia nanisy anarana Brand Hitachi Toerana niavian'i Japan Model Number CPMT Material Tungsten karbidde Colour Gold / Black / Grey Certification ISO9001: 2008 MOQ 10 ...
Marika malaza Hitachi karbidaide mampiditra cnc milina fitaovana EPNW0603TN-8 JP4120
Hitachi karbida ampidiro endri-javatra: 1.Original malaza marika Japan Hitachi; 2.Mamela ny fanapahana farany tsara; 3.New coating ho an'ny sisin-koditra fikosoham-bary; 4. fiainana lava atolotry ny coating vaovao GX miaraka amin'ny fanoherana tsara amin'ny fitafiana; 5.Application: fihodinana anatiny sy ivelany ho an'ny vy, vy tsy misy fangarony, vy atsipy ary zavatra hafa rehetra entina miasa mafy; 6.Conditions: Zavatra tsy ampiasaina, tsy nosokafana, tsy simba ao anaty fonosana voalohany. Hitachi karbida dia ampidiro famaritana: Anaran'ny marika Hitachi Toerana O ...
Ny fikosoham-bary karbaona karatra HITACHI dia mampiditra EDMT070220R-T JP4020
JDMT070204R Hitachi karbida mampiditra fitaovana fikosoham-bary